होसियार ! कलेज जाँदा छोटा स्कर्ट, मोबाइल र बाइकवाला पक्राउ पर्छन Darpansansar News
होसियार ! कलेज जाँदा छोटा स्कर्ट, मोबाइल र बाइकवाला पक्राउ पर्छन
काठमाडौं । भन्नलाई ‘स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डेन लाईफ’ भनिन्छ । एसइइ उत्तिर्ण गरेपछि धेरै विद्यार्थीको चाहाना स्वतन्त्रतामा रमाउने हुन्छ । कक्षा ११ र १२ को अध्ययन कलेज लाइफ मान्ने चलन रहेकाले विद्यार्थीले दुई बर्ष अवधीमा पूर्ण स्वतन्त्रता रोज्छन् ।
टिएनएजको उमेर शारीरिक र मानसिक रुपमा चन्चल मात्र नभइ फ्रिडम रहने उमेर हो । त्यसैले विद्यार्थी स्वतन्त्रता र विन्दास रहन चाहन्छन् । साच्चै स्टुडेन्ट लाइफलाई विन्दाससँगै गोल्डेन बनाउने बेला पनि हो ।
पूरानो वानेश्वरमा रहेको न्यू समिट कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत बसन्त गैरे कक्षा १० सम्म कडा अनुशासनमा पढेका थिए । गतबर्ष कक्षा ११ मा भर्ना भएर अध्ययन सुरु गर्दा उनले सोचेका थिए आकाशमा उड्ने चरी झैं विन्दास हुन पाइन्छ ।
कलेज लाइफ स्वतन्त्र हुन्छ । साथी संगत, हाँसखेल, घुमफिर अनि आफूले सोचेजस्तो दैनिकी कलेजमा विताइन्छ । ‘तर सोचेजस्तो र भनेजस्तो छैन कलेज प्रशासन’, उनले भने,‘कलेजको रुल्स र अनुशासन त पालना गर्नै पर्छ ।’
चारखालमा रहेको एनआइसी कलेज अध्ययन गरेकी सवु तिम्सिनालाई पनि कलेज लाइफ सोचेजस्तो स्वतन्त्रता लागेन् । ‘नयाँ साथीहरुसँग चिनजान, भलाकुसारी, घुमफिर त धेरै गरियो तर ड्रेस कोड, मोबाइल, एसिसरिजलगायतको प्रयोगमा चाहीं कडा रुल्छ छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार र कलेजको नियम भन्दै अनुशासन पालनामा कडाइ गरिएको छ ।’ बसन्त र सबुले जस्तो अनुशासनको पालना देशभरका प्लस टु वा कलेजहरुमा विद्यार्थीहरुले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विगत पाँच बर्ष यता उच्च माध्यमिक परिषदले तयार पारेको आचारसंहिता शिक्षा विभागले माध्यमिक तहका लागु गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले तयार पारेको आचार संहिता यतिबेला शिक्षा विभागको हेरिरहेको छ ।
शिक्षा ऐनको आठौं शंसोधन पछि नयाँ नियमावली मार्फत माध्यमिक तहका कक्षा संचालनमा अझ पृथक र प्रभावकारी आचार संहिता पनि तयारी भइरहेको छ । सानोठिमीमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक उत्तम देव विष्टका अनुसार विद्यार्थीहरु कक्षा १० सकेपछि स्वतन्त्रता खोज्दछन, स्वतन्त्रताका नाममा विकृती बढेकाले यस्तो संहिता आवश्यक परेको हो । उनी भन्छन्, ‘ टिएनएजमा फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, उमेरगत हिसाबले विद्यार्थीले स्वतन्त्रता खोज्ने कारणले विकृती देखा पयो, त्यसैले यो आचासंहिता आवश्यक भयो । ’
तर आचार संहिता एउटा बाटो देखाउने माध्यम भएकाले बाध्यकारी चाहीं नहुने उनले प्रष्ट पारे । विद्यालयमा नैतिकताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै अनुशासित जनशक्ती तयार गर्न आचार संहिता आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार मन्त्री परिषदमा पेश गरेको शिक्षा नियमावली आठौं शंसोधन सहितको नियमावलीमा शिक्षक–विद्यार्थीको आचार संहिता पनि उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको कानुन नबनेसम्म निर्देशिका बनाएर आचार संहिता लागु गराउन आदेश आएको उनले बताए । डा. लम्साल भन्छन, ‘आचार संहिता भनेको एउटा गाइडलाइन मात्र हो, यो बाध्यकारी हुँदैन त्यसैले अनुशासनलाई बुझेर स्वयम पालना गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।’
कतिपय विद्यालयहरुले आचारसंहिता पालन गरेको भए पनि अधिकांशले यसलाई पालना नगरेको पाइएको छ । उक्त विषयलाई ध्यानमा राखी माध्यमिक तहका लागि भनेर २०६९ सालमा बनेको आचार संहितालाई नै केही परीमार्जन गरी नियमावली मार्फत सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ६३ बुँदामा समेटिएको आचार संहिताको केही अंश यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
मोबाइल र बाइक बन्देज
कक्षा ११ र १२ मा अध्ययरत विद्यार्थीलाई विद्यालय वा कलेजमा मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसबाहेक कलेज ड्रेसमा मोटरसाइकल चलाउन पनि रोक लगाउने ब्यवस्था संहितामा उल्लेख छ ।
मोटरसाइकल चलाउँदा विकृती देखिएको साथै दुर्घटना बढेकाले यस्तो रोक लगाइएको उल्लेख छ । विद्यार्थीले यस्तो नियमलाई नमानेमा पहिलोपटक अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने र पुनः प्रयोग गरे पाँच हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै मोबाइल प्रयोग गरिएको पाइएमा पहिलोपटक चेतावनीसहित जफत गर्ने र अभिभावकलाई पत्र काट्ने । दोस्रो पटक भने तीन हजार रुपैंया जरिवाना गराउने उल्लेख छ । आइपट, ल्यापटप विद्यालयको स्विकृती लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
छोटो स्कट लगाउने र बंग गर्नेलाई कारवाही
कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुले अति छोटो स्कट लगाएमा पनि कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । स्कर्ट लगाउँदा घुँडाभन्दा कम्तीमा दुई इन्च तल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको उल्लघंन गरे कारवाही स्वरुप कलेज निस्कासन गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै विद्यालय पोशाकमा कुनै पनि होटल, सिनेमाहल, पार्क, सपिङ मललगायतका स्थानमा गएको पाइएमा सरोकारवालाहरुले प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने र कारवाही गर्ने व्यस्वथा छ । कक्षा बंक गरेमा भने बोर्ड परीक्षासमेत दिन नपाउने गरी निस्कासनको व्यवस्था छ । बंग गर्ने विद्यार्थीलाई पाँचौं स्टेपका कारवाहीहरु राखिएको छ । जसमा दुई हजार जरिवाना देखि कलेज निस्कासनसम्मको व्यवस्था छ ।
झगडा गर्ने र ग्याङ्ग बनाउनेलाई सजाय
टिएनएज उमेर भएकाले कलेजका विद्यार्थीहरुमा देखिएको ग्याङ्ग फाइट र झगडाका घट्नाहरुलाई निरुत्सायित गर्न पनि संहिता बनाइएको छ । विद्यार्थीले प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी तथा सहपाटीलाई गालीगलौज र हातपात गरेमा सार्वजनिक अपराध ऐन बमोजिम कारवाही गर्न प्रहरीको जिम्मा लगाउने अधिकार विद्यालयले पाउने छ । साथै विद्यालय निस्कासनको व्यवस्था पनि रहेको छ । तर विद्यालयहाता भित्र विद्यार्थीको सुरक्षा जिम्मा भने विद्यालयले लिनुपर्नेछ ।
कुनै पनि विद्यार्थीले घाउ, चोटपटक लाग्ने गरी कसैसँग दागा धर्न, हातपात गर्न, झगडा गर्न वा कुटाकुट गर्न पाउने छैन् । यदि त्यसो भएमा ३ हजार देखि १० हजारसम्म जरिवाना, निस्कासन, बोर्ड परीक्षामा बन्देज साथै अन्य खर्च र जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्याङ्ग बनाउने र धम्काउने विद्यार्थीलाई विद्यालय निस्काशन देखि बोर्ड परीक्षामा सामेल नगराउनेसम्मको व्यवस्था छ ।
कलेज वा विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुले फेसन वा एसिसरीजको प्रयोगमा ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ । मेहेन्दी लगाउन, लामा–लामा नङ्ग पाल्न, छात्रहरुले मुन्द्री लगाउन, लामो कपाल पाल्न वा हातमा वाला लगाउन पाइने छैन् । यसका लागि छुट्टै कारवाहीको व्यवस्वथा छ ।
कलेज र शिक्षकमाथि पनि कडाइ
विद्यालय वा कलेज साथै शिक्षकहरुलाई पनि आचार संहिताको घेरामा सिमित गरिएको छ । विद्यालय र शिक्षकहरुमा माथि पनि आचार संहितामार्फत निगरानी गर्ने प्रयास भएको छ । यसबारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
–शिक्षण सिकाई वातावरण राम्रो बनाउने प्रमुख दायित्व प्राचार्य, शिक्षक र विद्यार्थीको भएको हुँदा तीनवटै पक्षले एकअर्काप्रति समन्वयात्मक भावना राख्नु पर्ने ।
–हरेक विद्यालले परामर्श इकाई अनिबार्य राख्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई आवश्यक्ता अनुसार शैक्षिक र मनोबैज्ञानिक परामर्श सेवा दिनुपर्ने ।
–विद्यालय परिषर भित्र विद्यार्थीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ।
–विद्यालयहाताभित्र विद्यार्थीको सम्मान र स्वाभिमानमा धक्का पुग्ने काम गर्नु नहुने ।
–विद्यालयले उपयुक्त मापदण्ड बनाइ निर्धारण गरेबमोजिम अधिकतम र न्यूनतम विद्यार्थी संख्यामा मात्र भर्ना गराउने ।
–विद्यालयको शुल्क नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार मात्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
–विद्यालयले आफ्नो परीषर भन्दा बाहिर होडिङ बोर्ड राख्न नपाउने । त्यस्तो पाएमा दण्ड, जरिवाना तथा अन्य कारवाही हुनेछ ।
–विद्यालयले तडकभडक विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ५० हजार देखि ५ लाखसम्मको विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
–विद्यालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुको फोटो, नाम, विद्यार्थीको तस्वीर राखेर विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नियम उल्लघंन गरेको पाइएमा ५० हजार देखि २ लाख सम्म जरिवाना तथा सम्बन्धन खारेजसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
–शिक्षकलाई नियुक्ती नदिई अध्ययन अध्यापन गराउन पाइने छैन् । विद्यार्थीलाई शारीरिक दण्ड पाइने छैन् । यौन दुव्र्यवहार गरेमा सोही अनुरुपमा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
–शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यार्थी वा जोकोही स्टाफहरुबीच खराब नियतले हेर्ने, खराब अर्थ लाग्ने शब्द बोल्ने, शरीरमा खराब नियतले छुने कार्य गरे कडा कारवाही हुनेछ ।